Isitudiyo esiseBeachfront eCoronado Bay
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguFlor
Isitudiyo esingaphambili elunxwemeni eCoronado, ePanama. Indawo ekukuphela kwayo eCoronado apho ungadingi moto. Ukuhamba umgama ukuya kwivenkile yokutya, kwiindawo zokutyela, kunye nekliniki. Kanye elunxwemeni! Imisebenzi emininzi yokonwabela ixesha elimnandi ePanama, ukukhwela intaba, ukusefa, igalufa nokunye okuninzi
Indawo ebukekayo ephambi kolwandle. Ukutshona kwelanga okuhle kunye nokuhamba okude kunxweme olunoxolo. Ikwakufuphi kakhulu nevenkile yokutya kunye nebala legalufa. Iyafumaneka iGym kunye neendawo ezimbini zokuhlala eziphangaleleyo ezinamachibi okuqubha kumgangatho ophantsi kunye nophahla. Yindlu encinci yeemitha ezingama-50 kunye nokuhanjiswa okulungileyo kwendawo. Ilungele abantu aba-3, inombhede wendlovukazi kunye nebhedi yesofa, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, idesika yomsebenzi, itafile yangaphakathi ukonwabela isidlo sakusasa esilungileyo kunye nebalcony ekhululekile enetafile ukonwabela ezona zidlo zangokuhlwa zintle kunye neembono zolwandle.
4.77 · Izimvo eziyi-69
Ukuhamba umgama ukuya kwivenkile yokutya. Indawo yokutyela yePicasso yecafe kunye neluna rosa. Kwakhona icawa kunye. Ukuhamba ngaphezulu malunga ne-10-15 min kukho indawo yegalufa kunye nesitudiyo sokuziqhelanisa neyoga. Umgama othile, umnyango weCoronado kunye neCliniki yaseSan Fernando
Andihlali kule ndawo. Iindwendwe ziyakonwabela ubumfihlo kwaye ziya kuba nenkxaso yam ukuba zifuna nantoni na ukonwabela ukuhlala kwazo.